အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 Ring ကို Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 Ring ကို Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
sonitattoo နိုဝင်ဘာလ 24, 2016
1 ။ Ring ကို Tattoo အအေးဆုံးစုံတွဲများ
2 ။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Ring ကို Tattoo
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် #ring တက်တူးရယူခြင်းသင်သည်ကျူးလွန်ထားပြီးသို့မဟုတ်သေးကျူးလွန်ရန်သူတစ်ဦးမိတ်ဖက်ရှိပါကသင်လိုအပ်ပေမည်ဘာတွေလုပ်နေလဲ ..
3 ။ မိတ်ဖက် Ring ကို Tattoo
လက်စွပ်တစ်ကွင်း #tattoo ရတဲ့၏တရားဝင်မှုဒီတက်တူးထိုးထူးခြားသောစေသည်ဘယ်အရာကိုဖြစ်လာသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဒါပေမယ့်ယနေ့သင်သည်သင်၏လက်စွပ်တက်တူးထိုးဿုံလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်စိတ်ချပါနေကြသည်ကြောက်တယ်ခဲ့ကြသည်သူတွေကိုရှိခဲ့သည်။
4 ။ အံ့သြဖွယ် Ring ကို Tattoo
အံ့သြဖွယ်လက်စွပ်တက်တူးချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျလက်ထပ်သို့မဟုတ်စေ့စပ်သို့မဟုတ်သင်စေ့စပ်နေကြတယ်တဲ့စဉ်းစားကြသောအခါ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤတက်တူးထိုးသင်တို့တွင်အအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သောအရာကိုဖြစ်လာသည်။ အချို့သောရှုပ်ထွေးတက်တူးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤတတ်နိုင်လုပ်နေတာ၏ကုန်ကျစရိတ်
5 ။ cool လက်စွပ်တက်တူး
သင်တစ်ဦးတက်တူးထိုးရမရှိမရှိစဉ်းစားကြသောအခါ, သင်ဘယ်နေရာမှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ get ဖို့ရှေးခယျြသငျ့သညျ။ သို့သော်လက်စွပ်တက်တူးတစ်ခုသာသတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာချထားရှိသည်သောအနည်းငယ်တက်တူး၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
6 ။ တင့်တယ်လက်စွပ်တက်တူး
ဘယ်လိုသင်ဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးကိုကြိုက်သလဲ? အဆိုပါ #design ရိုးရှင်းပြီးသေး, သင်တန်ဖိုးထားရန်အဘို့အချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့ငြိမ်ဝပ်နှင့်သင်၏လက်စွပ်တက်တူးထိုးရနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
7 ။ စူပါလက်စွပ်တက်တူး
8 ။ အထူးလက်စွပ်တက်တူး
သင်အထူးတက်တူးထိုးထားသောမတိုင်မီယူရန်လိုအပ်ပါတယ်အချို့မရှိမဖြစ်အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လက်စွပ်တက်တူးနှင့်အတူပိုကောင်းရဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသောအခါ, သငျသညျတစျခုလုံးခြားနားချက်စေသည်ကြောင်းကိုဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ဖို့သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူလာအရေးကြီးပါသည်။
9 ။ အံ့သြစရာလက်စွပ်တက်တူး
သင်ကဖြတ်ပြီးလာအခါတိုင်းအံ့သြစရာလက်စွပ်တက်တူးလစျြလြူရှုမရပါ။ ကျနော်တို့လာမယ့်အဆင့်အထိထိုအကွင်းတက်တူးယူကြသူအမြိုးသမီးမြားကိုတှေ့မွငျပါပွီ။ ဒါဟာသင်တက်တူးထိုးဤအမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းလက်ထပ်ယောက်ျားမိန်းမတို့အများကြီးမြင်နေကြသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
10 ။ Mesmerize လက်စွပ်တက်တူး
11 ။ ချစ်စရာလက်စွပ်တက်တူး
ချစ်စရာလက်စွပ်တက်တူးရဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်လက်ချောင်းများသည်ကြည့်ဘယ်လောက်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်လော သင်ဤကဲ့သို့သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက်စွပ်တက်တူးဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
12 ။ ချစ်စရာ Ring ကို Tattoo
13 ။ chic လက်စွပ်တက်တူး
အမှန်မှာဒီ chic လက်စွပ်တက်တူးမြင်တော်မူသောလူတိုင်းချစ်ကြလိမ့်မည်။ သင်ဒီဇိုင်းများဤအမျိုးအစားကိုမြင်သောအခါတယောက်တည်းကျန်ရစ်သောခံရဖို့မရှိကြပေ။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ချင်ပါသလဲ?
14 ။ အကောင်းဆုံး Ring ကို Tattoo
15 ။ ချိုမြိန်ရှာဖွေနေလက်စွပ်တက်တူး
ဒီသင်ပထမဦးဆုံးလက်စွပ်တက်တူးထိုးလျှင်, သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းအဓိကအရာ, ဒါကြောင့်သင်ကလိုအပ်သောအရပ်များတွင်နစ်နာမှုလိမ့်မယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တက်တူးထိုးခြင်း၏နေရာချထားသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကဆွဲနောက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ရန်မယ်လို့အရာဖြစ်တယ်။
16 ။ Awesome ကို Looking Ring ကို Tattoo
17 ။ ချစ်သူများလက်စွပ်တက်တူး
သူတို့အလောင်းတွေပေါ်မှာရေးဆွဲခံရဖို့တက်တူးအဘို့ထိုင်သည့်အခါအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ညှဉျးဆဲန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးနေကြသည်မတိုင်မီသို့သော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဤလက်စွပ်တက်တူးအချိန်မယူပါဘူး။ သငျသညျဤကဲ့သို့သောလက်စွပ်တက်တူးကိုရွေးချယ်နိုင်ကြသည်အခါ, သငျသညျကိုထောရတဲ့၏သေချာပါသည်။
18 ။ စိတ်ကြိုက်လက်စွပ်တက်တူး
တချို့ကပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူတို့ရဲ့လက်ကောက်, အောက်ပိုင်းခြေထောက်, ခြေ, နံရိုးနှင့်ကျောရိုးနယ်မြေကပြောသည်ကြပါပြီ, အများဆုံးထိခိုက်စေသောအစက်အပြောက်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်, သင့်လက်စွပ်တက်တူးကိုစိတ်ကြိုက်သင်သည်ကိုယ်အဘို့လုပ်နိုငျသောညာဘက်ရွေးချယ်မှုများထဲမှနိုင်ပါတယ်။
19 ။ ရိုးရှင်းတဲ့လက်စွပ် Tattoo
20 ။ Ring ကို Tattoo Cool
သငျသညျတက်တူးထိုးအနုပညာရှင်တွေကြောင့် recuperates သည်အထိတစ်ဦးတက်တူးထိုးထားတဲ့ပွင့်လင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌လက်အိတ်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်ကိုသိရန်လိုပေမည်။ သူတို့သည်သင်၏အသားအရေရောက်ရှိကြသောအခါ Thusly, သူတို့အဘယ်သူမျှမလက်ဝါးကပ်တိုင်ထင်းရှိကွောငျးဒီတော့သူတို့မိမိတို့လက်ကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
21 ။ စုံတွဲများ Ring ကို Tattoos
ဤသည်သင်တို့အဘို့သလောက်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအဘို့ဖြစ်၏။ သူတို့သေချာတစ်ဦးချင်းစီ inking အခါအဲဒီမှာသင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာအချို့တို့၏အသွေးဖြစ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကသင်၏အသွေးနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသူတို့၏အသားအရေလာပြီမှမိမိတို့ကာကှယျဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
22 ။ သူငယ်ချင်းများ Ring ကို Tattoo
23 ။ တော်တော်လေး Ring ကို Tattoo
သင်ဒေသအတွက်ခဲဖွယ်စားဖွယ်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကျော်ကုသမှုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ကအများကြီး rankle ပေလိမ့်မည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်ရေးသူ့ဟာသူအဖြစ်မနည်းနှစ်ဆယ်လေးပါးထက်နာရီအချို့ရောင်ရမ်းခြင်းမျှော်လင့်ထား။ ဤသည်ကိုကျော်အလေးပေးဖို့အချည်းနှီးဖြစ်၏နှင့်လုံးဝသာမန်ပါပဲ။
24 ။ နေချင်စဖွယ် Ring ကို Tattoos
ကြောင်တက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးခြေကျင်း Tattoosပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးနှလုံး Tattoosခြင်္သေ့သည်တက်တူးငှက်တက်တူးမျက်စိတက်တူးမြှားတက်တူးအသင်္ချေတက်တူးလက်တက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းလူမျိုးစုတက်တူးပန်းချီတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများဆင်တက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosရွှေလင်းတတက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးချစ်စရာတက်တူးလတက်တူးအစ်မတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးဂီတတက်တူးခြေလျင်တက်တူးတက်တူးထKoi ငါးတက်တူးဟင်္တက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးလက်တက်တူးrip တက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးလည်ပင်းတက်တူးစုံတွဲတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးစိန်တက်တူးFeather Tattooနေရောင်တက်တူးရေဘဝဲတက်တူး